DAAWO SAWIRO:- Maamulka gobolka Hiiraan iyo Ganacsatada oo shir deg deg ah ku yeeshay Beledweyne – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaDAAWO SAWIRO:- Maamulka gobolka Hiiraan iyo Ganacsatada oo shir deg deg ah ku yeeshay Beledweyne
DAAWO SAWIRO:- Maamulka gobolka Hiiraan iyo Ganacsatada oo shir deg deg ah ku yeeshay Beledweyne
15/03/2019 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Dibada, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Maamulka gobolka Hiiraan iyo ganacsatada magaalada Beledweyne ayaa shir deg deg ah uga socda xarunta maamulka gobolka Hiiraan ee magaalada Beledweyne.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed ayaa ganacsatada kala hadlaya muranka siyaasadeed ee ka jira wadada isku xerta Beledweyne iyo Matabaan.
Gudiga dadiidleyda ka shaqeeya gobolka Hiiraan ayaa shalay ku dhawaaqay in ay shaqo joojin sameeynayaan ka dib markii ay maamulka degmada Matabaan ay sheegen in aay canshuur ka qaadayaan gadiidka ku sii jeeda magaalada Beledweyne,halka ay ku gacan seeray gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed.
Dhanka kale shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa malmihii la soo dhaafay xaga maciishada ay ku sii kordheysay madama ay xerneed wadada isku xerta Beledweyne iyo Boosaaso oo inta bada ganacsiga Beledweyne ku xiranyahay.
Lama oga waxa ka soo bixi doono shirka ka socda magaalada Beledweyne oo u dhaxeeya maamulka gobolka Hiiraan iyo Ganacsatada gobolka Hiiraan oo cabasho ka ah canshuuradka lagu soo kordhiyay.
DAAWO:- Dhismaha Buundada isku xirta degaanka Beer-Gadiid iyo degmada Matabaan
Gunman kills dozens in New Zealand mosques